စပိန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(255 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... စပိန်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းတပါးအမြိုးသားတစျဦးဖြစ်ပါသည်, သေး 1812 အတွင်းပထမဆုံးထီကဒီမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ 1977 ခုနှစ်တွင်စပိန်အစိုးရလောင်းကစားများ၏ဥပဒေရေးရာစည်းမျဉ်းအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့သူကသာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အခြေခံထားတယ်သောလောင်းကစားဝိုင်း, သက်ဆိုင်နှင့် 1981 အတွက်တရားဝင် slot ကစက်တွေနဲ့အခြားအလားတူလောင်းကစားဝိုင်းဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း 80s အတွက်တစ်ဒါဇင်ကျော်အော်ပရေတာစပိန်နိုင်ငံတွင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖွင့်လှစ်ရန်လိုင်စင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့စပိန်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစား directory ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့သတိပြုပါ။ တိုင်းပြည် 60 ကာစီနိုလောင်းကစားရုံထက်ပိုမိုနှင့်ဂိမ်းကစားစက်တစ်သန်း၏လေးပုံတပုံအကြောင်းကိုရှိပါတယ်။
2012 အတွက်အင်အားသုံးသို့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအော်ပရေတာများ၏စည်းမျဉ်းအဖြစ်တရားမဝင်လောင်းကစားစည်းရုံးရေးအဘို့အပြစ်ဒဏ်များ၏တည်ထောင်ခြင်းအပါအဝင်အသစ်ကဥပဒေပြုအပြောင်းအလဲရောက်လာတယ်။ တိုင်းပြည်အတွင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်း Regulator လောင်းကစားများ၏စည်းမျဉ်း (Direcciónအထွေထွေက de Ordenación del Juego) အတွက်ဗဟိုရုံးဖြစ်ပါတယ်။ ရုံး၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး, လောင်းကစားထူထောင်မှု၏စစ်ဆင်ရေး၏ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဒဏ်ငွေများစည်းကြပ်ဖြစ်ကြသည်။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ, စပိန်အတွက်ဆိုဒ်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ဥပဒေများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် 2002 ကတည်းကစပိန်အစိုးရအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဥပဒေများ၏ဦးတည်ရွှေ့ဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနောက်ဆုံးတော့လိုင်စင်အော်ပရေတာအတွက်အခြေခံထူထောင်သောသူစပိန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဥပဒအွန်လိုင်းလောင်းကစား၏မွေးစားခဲ့သည်။
ပညတ္တိကျမ်းဇွန်လ 2012 အတွက်အင်အားသုံးသို့ရောက် လာ. , ထိုအချိန်မှစ. 70 လောင်းကစားအော်ပရေတာထက်ပိုလိုင်စင်ရပါပြီ။ သို့သော်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများနှင့်အ 25% အခွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားအော်ပရေတာမချန်မပြီ, သို့သော်တိုင်းပြည်အတွက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားစျေးကွက်စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကအထိ, အွန်လိုင်း slot ကစက်တွေစပိန်အတွက်ပိတ်ပင်ထားခံခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့်ဥပဒေပြုအမတ်များကပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, နှင့်ဇူလိုင်လ 2014 အွန်လိုင်း slot နှစ်ခု၏အဆုံးမှာအစိမ်းရောင်အလင်းခံရကြပြီ။
ထိပ်တန်း 10 စပိန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
စပိန်ကနေကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့် Spai ထံမှကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်
Next ကိုလမ်းကြောင်း CasinoToplists ခရီးသွားများအတွက်အပေါ်ရပ်တန့် - ကနေသာစပိန်နှင့်၎င်း၏ခမ်းနားမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဒရစ် enchants နှင့်၎င်း၏သမိုင်း, ကြော့ဗိသုကာ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုရန်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောသဘောထားကိုနှင့်အတူ excites ။ ပြောင်လက်တောက်ပသောစိတ်ခံစားမှု adrenaline ၏ပရိသတ်များအတွက်ဂိမ်းကစားခန်းမ, ကလပ်နှင့်နိုင်ငံကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုချစ်လိမ့်မည်!
ကာစီနိုက de မက်ဒရစ်;
Gran ကာစီနို Aranjuez ။
Las Vegas မှသဲ၏ဆောက်လုပ်ရေး - ရှုပ်ထွေး 2022 ဖြစ်၏
စပိန်၏နိုငျငံတျော - အရှိဆုံး, အဆင်းလှဧညျ့နှင့်နွေးထွေးသောဥရောပတဦး။
၎င်း၏ဗြာဆနျဆအမည်, ဒါပမေဲ့အံ့သွအလုံအလောက်သူမက "i-punk" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောရာဖိုနီးရှားဘာသာစကား, လက်မှလုယူ "သဲသောင်ပြင် hyraxes (ယုန်) ။ "
ပုံရှိပါတယ်မတိုင်မီတကယ်တိရိစ္ဆာန်များအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ ယနေ့စပိန် - အဘယ်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုအသက်, ကခုန်, အနုပညာနှင့်စွန့်စားမှုအဘို့လောကဓာတ်လုံးကိုသိဂုဏ်ယူယောက်ျားနှင့်လှပသောအမျိုးသမီးများတိုင်းပြည်။
စပိန်၏မြို့တော်, မက်ဒရစ်ဒသမရာစုမှနောက်ကျောစတငျရသောမာနထောင်လွှားသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ဒီမြို့တော်, သုံးသနျးကျြောလူတွေကိုမူလနေရာဖြစ်သည်ဟောင်းရပ်ကွက်နှင့်အလုပ်များအဝေးပြေးလမ်းမကြီး, မြောက်မြားစွာဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကလပ်အသင်းများပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူပေါင်းစပ်တော်ဝင်ဘုံဗိမာန်၏တိတ်ဆိတ်ကျက်သရေဖြစ်ပါတယ်။
စပိန် - တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကအရမ်းမဆင်မခြင်ပြုလုပ်တိုင်းသို့မဟုတ်နီးပါးတိုင်းကစားကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ စပိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာထီ, ကဒ်ဂိမ်းများ, လောင်းကစားများနှင့်သင်တန်း၏လောင်းကစားရုံ။ ကထက်ပိုမို 2013 ဘီလီယံယူရိုသုံးစွဲခဲ့သည်ဂိမ်းအပေါ် 10 သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တိုင်းပြည်များ၏ပျမ်းမျှအားနိုင်ငံသားအခြားနိုင်ငံများထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသောတစ်နှစ်လျှင် 480 ယူရိုဝန်းကျင်ထိုကဲ့သို့သောပျော်စရာအပေါ်သုံးစွဲသည်။
တရားဝင်စပိန်လောင်းကစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ အကြီးအကျယ်လောင်းကစား၏ကစားသမားများနှင့်ကိုင်ဆောင်သူများအတွက်အခွင့်အရေးနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအပေါ်သို့ထိပါး, ဒါပေမယ့်ဒီနေ့တရားကောက်ယူသောအခါကာလရှိခဲ့သည်။ 2011 မှာ, အီးယူစည်းမျဉ်းများအရသိရသည်တရားဝင်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်န့်သတ်ချက်များစွာရှိပါတယ်, ဥပမာ, ကာစီနိုလောင်းကစားရုံသာပိုကောင်းမြို့တော်ကိုကန့်သတ်ပြင်, ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာလုပ်ကိုင်စေနိုင်သည်။ ဧည့်သည်၏အသက် - 18 နှစ်ပေါင်းထံမှ။ ဂိမ်းထူထောင်မှုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေလူတယောက်အကွာအဝေးမှာတည်ရှိရပါမည်။
ဆုံးရှုံးမှု 2013 အတွက်မွေးစားခဲ့ပါတယ်တဲ့ပျက်ကွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လောင်းကစားရုံနှင့်ညီမျှသည်နှင့်အညီဖြစ်သောမှမကြုံစဖူးဥပဒ။ ဆုံးရှုံးမှုအနိုင်ရရှိတဲ့ပမာဏကိုကျော်လွန်လျှင်နှစ်ကုန်မှာကအခွန်ငွေပေးချေလျော့နည်းစေသည်။ ဒါပေမယ့်ဝင်ငွေအခွန်နှင့်အတူသငျသညျလိုအပ်သောပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်။
သင်တန်း၏, အသက်၏ဂိမ်းမြို့တော်၏ဗဟိုအတွက်အာရုံစိုက်နေပါတယ်။ မက်ဒရစ်တိုင်းပြည်နှင့်ပင်ဥရောပသုံးခုအကြီးဆုံးနှင့်အလှပဆုံးကာစီနိုလောင်းကစားရုံများမှန်ကန်စွာဂုဏ်ယူသည်။
ကာစီနိုက de မက်ဒရစ်
ကာစီနိုက de မက်ဒရစ် - စပိန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ရှေးအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးခေတ်မီလောင်းကစားရုံ။ မိုးကျန်ကြွင်းသောအရပ်နှင့်အတူငါးထပ်အဆောက်အဦး Alcala လမ်း, 15 အပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ 1836 ထဲမှာ, စက်ရုံသူတို့ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့အလောင်းအစားလိုသူချမ်းသာကြွယ်ဝ noblemen များအတွက်ကလပ်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့။ အဆိုပါအဆောက်အဦး Belle Époqueရဲ့အကောင်းဆုံးနမူနာဖြစ်တယ်, အတွင်းပိုင်းမှာလည်းမူရင်းစတိုင်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်: စကျင်ကျောက်, ခေထြား, ဇိမ်ခံကော်ဇော, ကုလားကာနှင့် tablecloths ဖြူ၏။
အဆိုပါကာစီနိုက de မက်ဒရစ်ဿုံမဆိုလောင်းကစားဘို့တပ်ဆင်ထားတဲ့ 12 ကြီးမားခန်း, ဖန်တီးခဲ့သည်။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုများထဲတွင်ဧည့်သည်ကျော်ကြားသောအနုပညာရှင်များ, ပန်းပုနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအားဖြင့်မူရင်းပန်းချီကားအရမ်းလေးစားမိပါတယ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကူးကန်နှင့်အားကစားကလပ်တစ်ခုချွေးပေါင်းအိမ်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်စားသောက်ဆိုင်အဖြစ်တစ်ဦးစာဖတ်ခြင်းအခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကအရမ်းစျေးကြီးပေမယ့်ထိုက်သည်။ ဥရောပ Poker Tour, များသောအားဖြင့် Monte Carlo တှငျကငျြးပခဲ့သော - ဒီမှာ 2011 ၌ရှိ၏, နောက်ဆုံး EPT လွန်။ Poker စပိန်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်; ရှာဖွေအလွန်ရိုးရှင်းပြီးတိုင်းပြည်အတွင်းနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်း (ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့) တစ်ဖဲချပ်ဝေပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်။
အကြီးမားဆုံးလောင်းကစားရုံက 29 ကီလိုမီတာမြောက်ဘက်မြို့တော်၏တည်ရှိသည်, စပိန် Gran မက်ဒရစ်စဉ်းစားသည်။ စားသောက်ဆိုင်က၎င်း၏ဧရိယာ 1981 စတုရန်းမီတာဖုံးလွှမ်း, 8000 ဖွင့်လှစ်, 200 slot ကကျော်အမျိုးမျိုးသော slot နှစ်ခု machinesand ထားပြီးအဘယ်သူမျှမချိုးလည်းမရှိ။
ဒီလောင်းကစားရုံရတာဟာသောသုံးထပ်အဆောက်အဦး, ဥရောပမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးနှင့်အလှပဆုံးတဦးဖြစ်ပါသည်, မှန်မှန်ကြော်ငြာနှင့်တင်ပြချက်များကိုဖယ်ရှားသည်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းကိုစပျစ်သီးကိုစတိုင် 50s အတွက်ကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဝတ်စုံနှင့်ဆက်ဆံရေး - လူတို့သညျစားဆင်ယင်ကုဒ်များအတွက်ဆောင်းရာသီရာသီ၌တည်၏။ ဒါဟာယင်းခရီးစဉ်အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစားသောက်ဆိုင်သို့သွားရောက်အားလုံးကိုအလှဆင်နိုင်အောင်လှပသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Gran ကာစီနို Aranjuez
Gran ကာစီနို Aranjuez - မက်ဒရစ်၏ဗဟို၏တောင်ဘက်စေရန်, မြို့ပြင်ရုံ 35 ကီလိုမီတာအခြားဒဏ္ဍာရီကာစီနိုတွင်တည်ရှိသည်။ ဒါဟာဧည့်သည်များလောင်းကစားဝိုင်းအမျိုးမျိုး, ဒါပေမယ့်လည်း, စားသောက်ဆိုင်များတွင်အရသာဟင်းလျာများပျော်မွေ့နေတဲ့ဒစ္စကိုအတွက်ပျော်စရာရှိသည်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသားရေးထူးခြားဆန်းပြားရှာဖွေနေ flamenco ပြပွဲ join ဖို့အခွင့်အလမ်းမသာကမ်းလှမ်း, ပွင့်လင်းနေ့စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါမြို့တော်ရဲ့လောင်းကစားရုံတစ်ခုတည်းသောလူသိများတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်များတစ်ခုချင်းစီကိုအပန်းဖြေစခန်းဧရိယာ၌ရှိကြ၏မဟုတ်ပါ။ ယူရို-Vegas မှာအသွင်ပြောင်းခံရဖို့ 2022 အတွက် Las Vegas မှသဲ၏အကြီးဆုံးရှုပ်ထွေးသော၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြည့်စွက်ရန်အစီအစဉ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို 12 အဆိုပါလောင်းကစားရုံအပြင် 18 တထောင် slot ကစက်တွေ, ညီလာခံခန်း, ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း, စျေးဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပင်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူအခန်းပေါင်းပါဝင်သည်တံ့သောဖျော်ဖြေရေးရှုပ်ထွေးသော, ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။
Las Vegas မှသဲများဆောက်လုပ်ခြင်းပြီးစီးပေါ်မှာနေ့စဉ်ဝန် 36 တထောင်ဧည့်သည်များ၏သက်သာနေထိုင်ဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်ဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးလောင်းကစားရုံဖြစ်လိမ့်မည်။ ဟောငျးကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်မကြုံစဖူးစကေး!
Museo del Prado ။ နေရပ်လိပ်စာ: Paseo del Prado ။ ခမ်းနားပြတိုက်စပိန်, အီတလီ၏ပန်းချီကားများ, ဒတျချြနှင့် Flemish သခင် featuring သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦ, အထဲမှာဧည့်သည်များအတွက်တည်ရှိသည်။
ပလာဇာမြို့တော်ဝန်။ နေရပ်လိပ်စာ: ပလာဇာမြို့တော်ဝန်။ ဇိမ်ခံဗိသုကာ ensemble နှင့်အတူစိတျစှဲသောဤလှပသောမက်ဒရစ်ဧရိယာ။
တော်ဝင်နန်းတော်။ နေရပ်လိပ်စာ: Calle Bailén။ ရှေးခေတ် Moorish ခံတပ်ယခုတရားဝင်နေထိုင်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်လည်ပတ်မှုဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းပေါင်းပန်းချီ၏မလွယ်ပါဘူး၏ပန်းချီကားများနှင့်အတူအလှဆင်နေကြပါတယ်။
ဘုရင်မကြီး Cofii ပြတိုက်။ နေရပ်လိပ်စာ: Calle က de စန်တာ Isabel, 52 ။ ဒါကအနုပညာစင်တာနှစ်ဆယ်ရာစုပန်းချီဆရာများ၏အရှိဆုံးကြည်နူးဖွယ်အကျင့်ကိုကျင့်ကိုစုဝေးစေခဲ့သည်။
Cibeles ရင်ပြင်မှာ။ နေရပ်လိပ်စာ: ပလာဇာ de la Cibeles ။ ကလေးမွေးဖွား၏နတ်ဘုရား - အလွန့်အလွန်လှပသောဧရိယာ Cybele တစ်ရုပ်ထုနှင့်အတူ XVIII ရာစုစမ်းရေတွင်း၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်။
စပိန်မှာတော့ဥရောပတိုက်တွင်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုထက်ပိုအရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေး။ ဤနေရာတွင် Trapeznichat အိမ်မှာနီးပါးလက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ပါ။
- သွေး, အဝါရောင် - သဲအနီရောင်: အမျိုးသားအလံ၏အရောင်များကိုကျွဲရိုင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း၏ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူရွေးချယ်ထားသည်။
30-35 ပြီးနောက် - စပိန် / လက်ထပ် 40 ပြီးနောက်လက်ထပ်ရန်နှင့်လေးတွေကိုစတင်လက်ခံခဲ့သည်။
ဂစ်တာတစ်များသည်သေနတ်ကိုင်တပ်သားတစ်ဦးကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်, စီးကရက်တစ် stapler, ဓါးအဘိဓါန် Navajo- နှင့်ဟာရှသားရေကိုတီထွင်ဒါဟာရီးယန်းကျွန်းဆွယ်၌တည်ရှိ၏။
စပိန် - Chupa Chups ၏မွေးရပ်မြေ, အလူသိများတဲ့သကြားလုံးများအတွက် wrapper ကိုယ်တော်တိုင်ကျနေတဲ့တီထွင်!
0.2 ထိပ်တန်း 10 စပိန်အွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.1.0.1 ကာစီနိုက de မက်ဒရစ်
3.1.0.2 Gran မက်ဒရစ်
3.1.0.3 Gran ကာစီနို Aranjuez
3.1.0.4 2022 အတွက်ယူရိုဂတ်စ်